MobileAppTracking: SDK ho an'ny fametrahana finday Attribution | Martech Zone
MobileAppTracking: SDK ho an'ny fametrahana Attribution amin'ny finday
Zoma, Aogositra 22, 2014 Sabotsy, Janoary 14, 2017 Douglas Karr
MobileAppTracking manolotra SDK (Android na iOS) hampiditra mora foana ny fanaovana tatitra amin'ny tambajotran-doka na mpiara-miasa amin'ny famoahana ao anatin'ny rafitry ny fampandrosoana. Raha vantany vao tafiditra ny SDK, azonao atao ny manara-maso ny zava-mitranga amin'ny mpiara-miasa amin'ny antoko fahatelo. MobileAppTracking dia tsy miankina amin'ny UDID ho toy ny fomba fanasokajiana - manohana safidy hafa fanovana izy ireo izay mifanaraka amin'ny politikan'ny fivarotana fampiharana.
Araho amin'ny alàlan'ny fampielezana doka findainao ny fametrahana ny fampiharana finday sy ny fandraisan'anjaran'ny mpampiasa.
MobileAppTracking afaka manome anao angon-drakitra fametrahana sy fanovana amin'ny fotoana tena izy, ahafahanao manatsara ny fantsom-barotra amin'ny fifandraisan'ny doka. Raketo ny varotra, amin'ny fividianana fampiharana, fisoratana anarana, famitana ambaratonga ary data hafa hamaritana ny sandan'ny androm-piainana (LTV) ary ny fitazonana ny mpampiasa. Azonao atao koa ny manara-maso ny fampiharana amin'ny solo-finday iray ihany!
Ahoana ny fomba fiasan'ny MobileAppTracking
Rohy fanaraha-maso - Miteraha rohy tokana ho an'ny loharanom-barotra tsirairay.
Doka finday - kitihina ny doka ary amin'ny alalàn'ny mpampiasa no amantarana ny mpampiasa fanondron-tanan-tanana.
App Marketplace - mametraka ny rindranasao ny mpampiasa.
mifanandrify - manokatra ny rindranasa ny mpampiasa ary mamantatra ny loharano amin'ny alàlan'ny dian-tànana ny SDK.
Ny Mobile App Tracking dia sehatra fizahana tsy mitanila izay manome ny fanarahan-dia sy ny fanaovana tatitra momba ny dokam-barotra amin'ny finday. Track tambajotra doka, mpanonta ary mpiara-miasa maro amin'ny fampidirana SDK tokana. Ny Mobile App Tracking no sehatra fampihavananao amin'ny fampielezana doka amin'ny finday rehetra.
Azonao atao ny manara-maso maherin'ny 50,000 0.002 ny famoahana isam-bolana hanombohana ary avy eo mandoa $ 2 isaky ny fanondroana aorian'izany. Ny vidin'ny volavola dia atolotra amin'ny fizarana finday lehibe mihoatra ny XNUMX tapitrisa na mihoatra.
Tags: Attributiontambajotram-pifandraisana tafiditraltvtambajotra doka findaympanonta doka findayanalytics amin'ny findayfampiharana ny findayfampiharana finday sdkfanamoriana fametrahana findayfitaterana findaymobile reporting sdkmpampiasa finday ltvsdk
Tsy mahita zavatra 3 amin'ny 5 amin'ny fahatsapana ianao
Torohevitra hanoratana Whitepapers izay mitondra ny varotra
Jan 26, 2015 ao amin'ny 4: 24 AM
Manontany tena aho hoe iza avy amin'ny marketing Attribution SDK manokana no mila ampidirina ao anaty lalao alohan'ny Soft Launch. Ary azavao azafady hoe inona ny hetsika lalao hanarahan'ny SDK.